Riyadii Farmaajo ee muddo kororsiga oo mugdi sii galaysa | KEYDMEDIA ONLINE
Riyadii Farmaajo ee muddo kororsiga oo mugdi sii galaysa
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa wuxuu ku han weynaa in ay mar uun u rumowdo riyo maalmeed uu dhex maquuranayay tan iyo markii uu gabaabsiga kusii socday muddo xileedkiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha diiday inuu kursiga si nabada ku wareejiyo ee ku dhawaad saddexda bilood xoogga ku jooga Villa Somalia ayaa waji gabax kala kulmay hammigiisii ugu dambeysay ee Farmaajo uu rajada ka qabay inuu sii joogo Villa Somalia muddo laba sano oo dheeri ah.
Midowga Africa ayaa Warmurtiyeed ay caawa soo saareen ku cambaareeyay tilaabadii 12 -kii Abriil 2021 Golaha Shacabka BJFS uu mudo kordhinta ugu sameeyeen Farmaajo. Waxayna sheegeen tilaabadaan in ay wiiqayso midnimada, xasilloonida dalka, geeddi-socodka iyo dimoqraadiyadda curdanka ah ee Soomaaliya.
Midowga Afrika ayaa waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee hadda ka jirta Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto wadajirka dalka, midnimada hay'adaha amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Golaha ayaa waxay ugu baaqeen dowladda Federaalka Soomaaliya, hoggaamiyeyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka in si degdeg ah dib loogu laabto miiska wadahadalka si loo meelmariyo heshiiskii 17 -ka September, kaas oo weli ah aasaaska iyo waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in Soomaaliya laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda oo daah-furan.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa tagay 18 -kii bishaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo, ujeedka safarkaas ayaa ahaa in uu ka codsado Madaxweynaha Koongo oo hada ah Gudoomiyaha Midowga Afrika in uu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixintaan Golaha Ammaanka ee QM iyo tan Midowga Afrika golihiisa Amniga iyi Nabadda, waxa uuna kala kulmay diidmo, isagoo aad uga carooday kaddibna soo gaabiyay safarkiisa ayuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Xubnaha wakiilada beesha caalamka oo ay qeyb ka yihiin Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku diideen go'aanka muddo kordhinta, hayeeshee Golaha Ammaanka ee QM iyo Golaha Amniga iyo Nabadda ee MA ayaa labadaba soo saaray baaqyo isku mida oo lagu diiddan yahay arrinta muddo kororsiga. Tani waxay soo af-jari doontaa ayaa la leeyahay riyo maalmeedkii kooxda Farmaajo ee ay ku seexanayeen tan iyo 12 -kii Abriil in ay sii fadhin doonaan xafiiska.